Guddi diyaarinaya maalinta Xoriyadda & Midnimada 1-da Luulyo oo kulan la qaatay ciidamada + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Guddi diyaarinaya maalinta Xoriyadda & Midnimada 1-da Luulyo oo kulan la qaatay...
Guddi diyaarinaya maalinta Xoriyadda & Midnimada 1-da Luulyo oo kulan la qaatay ciidamada + Sawirro
(Muqdisho) 29 Juun 2018 – Guddi wasiirro ah oo loo xilsaaray xuska maalmaha xoriyada Soomaaliyeed ayaa maanta la kulmay cutubyo ka tirsan ciidamada oo ku jiray dhoola tuska u diyaar garawgii u danbeeyay ee munaasabadda 1da Luulyo.
Bisha #Luulyo waa bil xageyga ku weyn.
1 Luulyo = Waa sanad Guurada xuriyad dalkeena .
15 Luulyo = Waa Sanad… https://t.co/gw0mydZbw6
— (●) alkatra (●) (@alkatra1) 1 juli 2017
Guddigan waxay kala ahaayeen wasiirka Gaashaandhiga Xasan Amardanbe, wasiirka Warfaafinta Daahir Geele, wasiirka maaliyada C/raxmaan Beyle iyo saraakiil ciidan.
Munaasabada 1da Luulyo sanadkan ayaa lafilayaa inay siwayn uga duwanaato munaasabadihii hore. Kulankan ayaa ka dhacay xarunta wasaarada Gaashaandhiga ee magaalada Muqdisho.
Previous articleANNA KAALAY IGA XIIR: ”Waan is nacay maxaa yeelay waxaan leeyahay BIDAAR-BARALEEY” (Daawo sheeko cajiib ah)
Next articleDAAWO: Xulka South Korea oo UKUN & waxyaabo kale lagu tuuryeeyay!